Manolotra anao ny hazandranomasina Murcian, aperitif | tsara sy matsiro ThermoRecipes
Marineras, aperitifa Murcian matsiro
Appetizers35 minitra250 kaloria
Eto ianao dia manana lovia mahazatra an'ny gastrology Murcian: tantsambo. Matetika izy ireo dia nohanina ho aperitif ary matsiro izy ireo.
Ny marinera karazana salady Rosiana somary tsy mitovy amin'ny an'ny nentim-paharazana (na ho an'ny akora na ho an'ny endriny), izay aroso ao anaty donut toetra (mitovy amin'ilay hitanao eo amin'ny sary) ary satro-boninkazo misy trondro izy.
Efa nolazaiko anao fa, raha tsy mipetraka eo amin'ilay faritra ianao, dia tsy ho mora aminao ny hahita io karazana donut io. Eritrereto fa ho matsiro toy izany koa raha raisinao amin'ny tehina mofo misy endrika hafa. Raha ny amiko, mba hanandramana hahatratra hazan-dranomasina tena izy dia nataoko tao an-trano ireo donut taorian'ny fanamboarana ny grssini.
Eny tokoa, izy ireo tantsambo amin'ny fametrahana valizy teriska ho tantsambo. Saingy afaka manao ny kinova lahy amin'ny takelaka isika, tantsambo (raha asiana terovika), na bisikileta (raha avelantsika irery ny sambo miaraka amin'ny salady).
1 Marineras, aperitifa Murcian matsiro
Matsiro izy ireo, ary tena vaovao, izy ireo no mahasarika indrindra. Marineras dia aperitifa avy amin'ny Faritra Murcia ary eto izahay dia mampianatra anao ny fomba fanamboarana azy.
Fotoana hiketrehana: 25M
Ovy 600 g efa voahodina (eo ho eo)
Karaoty 180 g efa voahodina (eo ho eo)
Rano fisotro 600 g handrahoana varoma
Gherch voatavo 100 g
Voahangy 2 amin'ny kapoaka
Sira (raha heverinao fa mety)
Mayonisà eran'ny sotro fihinana 3 (raha misy allergy amin'ny atody dia azontsika soloina lactonese izany)
Anchovies amin'ny vinaingitra (iray isaky ny marinera)
Hetezo ao anaty cubes kely ny ovy sy ny karaoty. Aza manahy be loatra satria tonga lafatra izy ireo nanomboka teo dia tsy hanana endrika intsony (saika paty ity salady ity). Nataonay tao anaty kaontenera varoma izy ireo.
Arotsakay ao anaty vera izao ny rano. Apetrakay amin'ny toerany ny kaonteneran'ny varoma ary rakofantsika. Izahay dia manao fandaharana 25 minitra, maripana varoma, hafainganana 1.
Amin'ny faran'ny fotoana dia esorinay ny kaonteneran'ny varoma ary hotehirizintsika izy ka avela hangatsiaka kely.
Atsipinay ny rano avy amin'ny vera ary apetraka ny pickles. Manaikitra isika mandritra 4 segondra amin'ny hafainganam-pandeha 5. Izahay dia manampy ny lamina sy ny programa 2 segondra, hafainganam-pandeha 4.
Rehefa mangatsiaka kely ny ovy dia apetratsika amin'ny lolo ny lolo, fantatsika fa tsy maintsy mifanaraka tsara izy io. Ampiarahinay ny ovy sy ny karaoty. Izahay dia manao fandaharana 15 segondra, hafainganam-pandeha 2, fihodinana havia.
Manampia mayonnaise sy programa 3 sotro fihinanana 5 segondra, hafainganam-pandeha 2, fihodinana havia. Raha heverinay fa mety dia manampy sira kely izahay.
Napetrakay tao anaty vata fampangatsiahana mba hampangatsiaka. Amin'ny fotoana anaovana ny fanompoana dia apetratsika amin'ny salady ny salady (tena vaovao), bebe kokoa na kely araka izay hitanao amin'ny sary, ary nasiantsika trondro eo ambonin'izy tsirairay avy.
Raha tsy manam-potoana hanapahana ny karaoty sy ovy ho efamira ianao dia azonao atao amin'ny silaka. Tsy maintsy jerenao fa efa masaka tsara (angamba manome minitra minitra vitsy hafa) ary zarao kely indray mandeha ireo masaka ireo alohan'ny hametrahana azy ao anaty vera.
Fanazavana fanampiny - mofomamy
Loharano - Ny tantsambo, ny tantsambo ary ny bisikiletany
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » Resipeo thermomix » Appetizers » Marineras, aperitifa Murcian matsiro
Salama Ascen, ny faran'ny herinandro lasa teo dia nataoko aperitifa ny Marineras ary tianay be izy ireo, arahaba anao noho ny fomba fahandro anao. Napetrako tamin'ny toast ireo. Soooooooooooooooooooo ...
Valiny tamin'i Ana Belén
Tsara toy inona, Ana Belén. Raha miala sasatra any Murcia ianao indray andro dia aza misalasala manandrana azy amin'ny iray amin'ireo bara maro ao aminy. Ho hitanao fa mahafinaritra.
Nataoko izy ireo, nefa tsy nisy donuts, ary tena tianay izy ireo.
Misaotra anao Vero.
scotch dia hoy izy:
Tiako ilay fomba fahandro, na dia vao mainka aza raha soloinao variant ny karaoty sy ny pickles, izany hoe, ny pickles dia efa voatetika amin'ny vinaingitra amidy anaty siny fitaratra. Fahombiazana. MISAOTRA
Valiny tamin'i Fita
Atody voatoto miaraka amin'ny foie eo am-pandriana ovy